Ny Xiaomi Mi Band 5 miaraka amin'ny NFC dia havoaka manerantany | Androidsis
Ny Xiaomi Mi Smartband 4 no bracelet an'ny marika sinoa ankehitriny, misy eny an-tsena. Na dia efa miasa amin'ny mpandimby azy aza ny orinasa, ny Xiaomi Mi Band 5, izay antenaina handona magazay amin'ny taona manaraka, raha toa ka mifanaraka amin'ny drafitra rehetra. Fehin-tànana vaovao nantsoina mba ho bestseller toy ireo taranaka teo aloha.
Toy ny mahazatra amin'ity fehin-tanana ity, ny Xiaomi Mi Band 5 dia havoaka amin'ny kinova miaraka amin'ny NFC. Hatreto dia any Shina ihany ireo kinova ireo. Izany dia nitranga tamin'ny dikantenin'ity taona ity ihany koa, saingy toa tamin'ny taona 2020 dia afaka nanana fanovana isika tamin'ity lafiny ity tamin'ny marika.
Satria misy ny tsaho momba ny fehin-tànana amin'ny herintaona avy amin'ny marika sinoa. Fandefasana izay tsy ofisialy amin'izao fotoana izao, saingy toa ity Xiaomi Mi Band 5 ity dia halefa miaraka amina kinova miaraka amin'ny NFC, toy ny mahazatra ao amin'ny orinasa. Amin'ity indray mitoraka ity ihany dia hanana famotsorana an'izao tontolo izao.
Tsaho ity izay indrisy fa mahazatra be. Efa tamin'ny tranga teo aloha, miaraka amin'ny fehin-tànana amin'ity taona ity, dia voalaza fa ny maodely miaraka amin'ny NFC dia hiafara amin'ny fandefasana azy eran'izao tontolo izao, zavatra izay mbola tsy nitranga tamin'ny farany. Saingy tsy midika izany fa afaka miova ny zavatra amin'ny taona 2020.
Xiaomi dia iray amin'ireo marika amidy indrindra amin'ny sehatry ny akanjo. Mety ho fahombiazana ny Xiaomi Mi Band 5, araka izay azo antoka. Ka ny fananana kinova NFC misy manerantany dia zavatra mety hahaliana ny orinasa, indrindra amin'ny fandrosoan'ny fandoavam-bola amin'ny finday.
Tsy maintsy miandry volana vitsivitsy na dia mandra-pomba ofisialy ny Xiaomi Mi Band 5. Azo antoka fa haseho amin'ny tapaky ny taona ho avy io, ka amin'ity volana ity dia hanana fotoana be dia be isika hianarana bebe kokoa momba ity bracelet ity amin'ny marika sinoa. Hilaza aminao izahay araka ny fantatra bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi Band 5 miaraka amin'ny NFC dia azo alefa manerantany
One Life Extreme Warrior dia hetsika RPG tokony horaisina
Ny sary voalohany an'ny Motorola misy fakantsary mihetsiketsika dia voasivana